Ngaba uzingela i-steroid enamandla ephumelele ukuthembela kwabakliniki? Ewe, methyltestosterone kufuneka ube ngowona khetho oluzayo. Fumana izibonelelo zokusebenzisa le nkunkuma, imbali yayo kwiprogram yokwakha umzimba kunye nensimba yonyango, imiphumo emibi, kunye nendlela yokuthenga le dose.
Ukwakhiwa kwezakhiwo akukho konke ngokubhalisela kwindawo yokuzivocavoca kwendawo kunye nokwenza umsebenzi osebenza ngamandla. Kufuneka wenze okungaphezu kokusebenza. Emva kwakho konke, unokulahlekelwa yintliziyo kunye nefuthe endleleni, ngakumbi xa iziphumo zingabonakali.
Wonke umakhi womzimba ujonge phambili kwi-ribbed physique kunye nezihlunu ezixubile kakuhle. Ukuba uhambela ukhuphiswano, ubugwenxa, amandla, kunye namandla uya kubala. Ngokwenene, ezi zizwe ziyisiseko sempumelelo yakho. I-Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Yiyiphi iWins?)
Ngaba udibene nale nyaniso? Gcina kuba kukho ubuninzi obugcinayo kuwe. Nangona sineenjongo ezahlukeneyo, sonke sifuna ukuba umlingo ugxininise ukulwa nomdlali wethu. Kule meko, akuze kube buhlungu ukuzama i-steroid njenge-methyltestosterone. Ukuze kuzuze ukwandiswa kobugwenxa bomsebenzisi, eli liza lidlula bonke abakhuphiswano.
Ngaphambi kokuba uthathe i-methyltestosterone, qiniseka ukuqonda eli nqaku.
1.Yintoni i-Methyltestosterone? Ingaba isebenza kanjani?
Methyltestosterone liphakathi kwezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids zesikolo ezisekudala zokwakha umzimba. Yinkampani yeekhemikhali ene-CAS ayikho 58-18-4. Le mveliso yilezi zixhobo eziqhelekileyo zabasebenzi bomzimba njengoko kubonisa iimpawu ze-androgenic kunye ne-anabolic.
I-Methyltestosterone yindlela yokuhlola ngomlomo onguvulindlela, ovela kwi-testosterone. Yintoni eyenza iqela eliyingqayizivele libandakanya i-alkylated C17-alpha molecule. Ngokwenzululwazi, ukongezwa kweqela le-methyl kuqinisekisa ukuba isilwanyana singaphila ngokuchithwa kwemishini kunye neenkqubo zokugaya umzimba.
KwiMethhyltestosterone iqela le-methyl lidibanisa kwi-17th isikhundla se-athomu yekhabhoni. Le nxalenye yenza ukuba i-composic iwele kwiklasi ye-C-17 i-alpha-alkylated steroids. Nangona kunjalo, ngenxa Ukwakhiwa komzimba weMethyltestosterone, izakhiwo ze-anabolic azibonakali njengokuba zikhona nezinye i-C-17-aa.
Izilinganiso ze-androgenic kunye ne-anabolic yemveliso zi malunga ne-100 kwinqanaba ngalinye. Le 1: Umlinganiselo we-1 uhambelana neyo testosterone.
Nangona le testosterone yasekuqaleni ishiya nayiphi na i-bodybuilder enomzimba omzimba onobubele kunye nokusebenza kakuhle, ukusetyenziswa kwayo kusemhlabeni jikelele. Ngokomzekelo, i-pharma ibanga leMethyltestosterone linama-neres yezokwelapha kwonyango lwebele lwebele, unyango lwe-menopausal, kunye nokulawulwa kwe-osteoporosis.
Ubukho beMethyltestosterone bubuyela kwi-1935. I-steroid yaphula umhlaba omtsha wokusetyenziswa kweemlomo kunye ne-orrogens kungekhona kuphela kwizicelo zeklinikhi kodwa nakwi-domain building building. Isizathu esiyinhloko sokuphuhliswa kweziyobisi kwakufuneka kuthathe indawo ye-testosterone yemvelo kwindoda xa amazinga okugcina aphantsi kwexesha eliqhelekileyo.
Nangona I-Methyltestosterone ithengiswa yayifumaneka njenge-steroid yomlomo engahlambulukiyo, i-Ciba Pharmaceuticals ifike ngamacwecwe e-buccal ayeza kuchithwa ngqo ngolwimi. Ezi ziyobisi zinobukrakra phakathi kwe-1950 kunye ne-1990 kunye negama legama, iMetandren Linguets.
Esikhundleni sokugwinya iipilisi zeMethyltestosterone, ungafaka iipilisi zeMetandren zeLinguets phantsi kweelwimi kwaye zivumele ukuba zichithwe. Emva kokumathisa, i-steroid ijikeleza ngeembrane ezingenayo ngaphandle kokuhamba kwesibindi.
Njengaye nayiphi enye i-anabolic steroid, ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kuye kwaqhubeka kungqubuzana. Kwimiba enomlando ococekileyo, amaninzi amazwe aye avalwe kwaye atyhulwa Umthengisi weMethyltestosterone kwiimarike zeziyobisi. Thatha, umzekelo, ekupheleni kwe-80s; Umbutho we-Endocrine waseJamani unqamle ukurhweba kweMethhyltestosterone kwii-pharmacy zaseJamani.
Emva koko, amazwe amaninzi aseYurophu ayilandela ngokufanelekileyo kwaye avalwe ngenxa yemiphumo emibi ye-Methyltestosterone njenge-hepatotoxicity. Kwimimandla e-US, isicatshulwa sivumelekile kuzo zombini iiklinikhi kunye neenjongo zokwelapha. Nangona kunjalo, kunzima ukuyifumana njengendlela yokwenza i-stand-alone yokwakheka ekubeni umenzi we-methyltestosterone wayehlala edibanisa nezinye izithako.
E-US, isicatshulwa sisemthethweni kuphela phantsi komyalelo osemthethweni. Imibutho emikhulu yezemidlalo kuquka iiKomiti zee-Olimpiki zamazwe ngamazwe zenze isigwebo sokusetyenziswa kwe-methyltestosterone kwimidlalo. Yimveliso yeShedyuli III kunye ne-IV e-United States naseCanada, ngokulandelanayo.
Indlela iMethyltestosterone isebenza ngayo
Ukuba i-alpha alkylated steroid, i-Methyltestosterone ibopha kwi-androgen receptors (AR). Isebenza njenge-substrate ye-5α-reductase enzyme, ngoko ke, iguqula kwi-17α-methyl-dihydrotestosterone (i-mestanolone). Emva kokubophelela kwiiseli ze-AR, i-steroid iqalisa ukubhalwa kweejeni ze-androgen, ezijongene nokukhula okukhulu kunye neempawu zesini zesini.
Ngokungafani nezinye iziphumo ze testosterone, uvavanyo lwe-methyl lunomlinganiselo ophantsi wezenzo ze-anabolic. Ngoko ke, i-anabolic kwi-androgenic ratio isancinane kakhulu, okwenza i-steroid ibe neepropati eziphezulu ze-androgenic.
I-downside ye-methyltestosterone ye-bodybuilding steroid yinto yokuba i-aromatizes ngexesha lezenzo zomzimba. Ukuncibilika kwamanzi kwi-17α-methyl estradiol enamandla kudala i-estrogenicity kunye neziphumo zecala le-estrogenic ezilandelayo njengokugcina amanzi kunye ne-gynecomastia.
I-Methyltestosterone Ifom yeFom
Igama lemveliso Methyltestosterone
Igama leKhemikhali · 17A-methylandrost-4-en-17β-ol-3-enye
CAS akukho. 58-18-4
Inqaku lokuxuba (° C) 161 - 166
Ixabiso lokubilisa elilinganiselwa (° C) 383
bushushu egcinwe Gcina kwiqondo leshushu (2 ° C - 20 ° C), kude nobushushu, umswakama, okanye ukukhanya
Kubonakala I powderless white crystalline powder
Isisindo somzimba 302.46 g / mol
Umzimba · Ubuncwane bamanzi yi-34 g / mol kwi-25 ° C
· Methyl utywala
· Kancinci kancinci kwioli yemifino
Iklasi yeziyobisi Anabolic-androgenic steroid
ukusetyenziswa Ukuqinisa umzimba kunye nokukhuthaza amandla amanqanaba
Isilinganiselo se-Anabolic 115 - 150
Androgenic 95 - 130
Amagama oLuntu oLuntu · Metandren
2. I-Methyltestosterone Isilinganisi
Iindlela zoLawulo lweMethyltestosterone
Kukho iindlela ezintathu zokulawula i-methyltestosterone. Ekubeni itholakala kwifom yefribhethi, indlela eqhelekileyo imlomo. Ungayigwinya ipilisi okanye uyibeke phantsi kweelwimi okanye phakathi komhlathi kunye namazinyo ekulawulwa kwamagama angaphantsi kunye ne-buccal, ngokulandelanayo. Kule meko, isichengiselwano siya kutshatyalaliswa ngokuthe ngqo ngaphandle kokuhamba kwimizila yesisu.
Thatha i-steroid kanye ngosuku ngeveki ezintathu kwixesha elilinganayo lexesha. Ngokufanelekileyo, qinisekisa ukuyilawula kwisisu esingenalutho ukwenzela ukwandisa ukufumaneka kwezinto. Ukuthatha uvavanyo lwe-methyl kunye nokutya kuya kubangela ukuba ichithe ngamafutha angagqithwanga, ngoko ke, ukunciphisa ukutshatyalaliswa kwayo kwigazi.
The Umthamo weMethyltestosterone ihamba kwizinto ezininzi. Ngokomzekelo, amadoda aya kuhlala enenani eliphakamileyo kwinqanaba le-dosing kunabesifazane. Kwakhona, indlela yokulawula iya kugqiba inani le-steroid isakhiwo somzimba esiza kuthatha. Ukuba ukhetha amacwecwe amacwecwe, umthamo uza kuba wezantsi ngenxa yobungakanani obuphezulu.
Ngenjongo yokuphucula umzimba, thatha umlinganiselo wemihla ngemihla phakathi kwe-10mg kunye ne-50 mg ukuya kwiiveki ezili-8. Nangona kunjalo, izigulana ezijongene nokuntuleka kwe-androgen zingasebenzisa izidakamizwa nje kuphela ukuba iziphumo ezibi zingekho. Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) yoKwakha
Ukuba umgomo wakho kukuphucula ukusebenza, ke i-methyltestosterone ayikho. Makhe ndicacise. Inemiphumo ephezulu ye-androgenic, engenakho ivule kakuhle nge-balance hormonal female. Ngoko ke, akufanelekile ukubeka ingozi kwimiphumela yecala lokuhlaselwa.
Kucetyiswa ukuba abesetyhini basebenzise i-steroid kuphela phantsi komyalelo wonyango. Kwiimeko ezininzi, amanani aphantsi njenge-3mg aya kulawula iimpawu zokumiswa kwesisu. Nangona kunjalo, imihla ngemihla i-methyltestosterone dosage Unako ukunyuka ukuya kwi-200mg xa unyanga i-carcinomas.
Ngaphambi kokuba uthathe uvavanyo lweemethyl, qiniseka ukuba ufunde ngelebula yecawa. Olu lwazi luya kukunika indlela ekusebenziseni ngayo iziyobisi, izikhuselo zokukhusela, kunye nento omele ulindele xa usesilweni.
Enye into ebalulekileyo ukuba uqaphele kukuba kufuneka uqinisekise ukuba ulawula i-methyltestosterone ngezikhathi eziqhelekileyo. Ukuba uthe waphoswa umlinganiselo wemihla ngemihla, thatha ngokukhawuleza ukuba ingcamango ikubethe. Ukuba kuhamba ixesha elidlulileyo, weqa umntu olahlekileyo kwaye uqhubeke nomyalelo wakho oqhelekileyo.
Esi sidakamizwa siyabasebenzi kubo bobabini nabasetyhini. Nangona kunjalo, amabhinqa kufuneka asebenzise umlinganiselo ophantsi kunokwenzeka.
I-Methyltestosterone I-Drug Interactions
Uvavanyo lweMethyl luyakwazi ukusebenzisana kunye namachiza amaninzi, izongezo zokutya, amayeza emfuyo kunye neminye imithi engagunyazisiyo. Olu luhlu lubandakanya imithi yesifo sikashukela, i-blood thinners njenge-warfarin, ne-oxyphenbutazone.
Oomama abakhulelweyo nabanconyayo akufanele bathathe i-methyltestosterone. Nangona ukhulelwe ngelixa usebenzisa iziyobisi, kufuneka uqikelele ukuyeka umthamo. Izifundo ezenziwe kwiinqwelo ezikhulelweyo ziqinisekisa ukuba i-steroid ibangela ukukhubazeka kokuzalwa, umntwana wesisu, kunye nezinye izinto ezingaqhelekanga.
Kubantwana kunye nentsha, ukusetyenziswa kovavanyo lwe-methyl kunokuphazamisa ukuphuhliswa kwethambo.
Amanye amaqela afanele ahlambuluke kwi-steroid yizigulane zomhlaza, abantu abaneemeko zentliziyo, kunye nalabo abanegazi. Nangona inembali yokulawula kunye nokunyanga i-cancer yebele, kuyilungele ukuba ube negunya logqirha.
Ewe, ukuba ungumqhubi osebenzayo, i-steroid ingaba yodwa inketho yokwandisa ukusebenza kwakho kunye nokwandisa amandla akho. Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele ekubeni imibutho yezemidlalo iya kukuzingela. Ngokuqinisekileyo uya kuphula i rekhodi yehlabathi, kodwa amagunya aya kuluhluba imvalo yakho kwaye akuvumele ukuba uthathe inxaxheba kwiimidlalo.
Umjikelezo oqhelekileyo we-methyltestosterone uhlala phakathi kweeveki ezintandathu ukuya kweebhozo. Umlinganiselo omiselweyo womlomo ngu-40 - 50mg. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba nayiphi na ixabiso elingaphantsi kwesi sihlomelo kuya kuvelisa iziphumo. Ngokuchaseneyo, uya kuqaphela ukuphuculwa okumbalwa kunye nemiphumo emibi kakhulu.
Ukuba ufanele usebenzise ifom ye-buccal, qiniseka ukunciphisa umlinganiselo ukuya kwi-50%. Uya kufuneka unqumle kwi dose ngenxa yokuba le ndlela yokulawula ineentlobo eziphezulu zokufumaneka ngokuthelekiswa neefom yomlomo.
Ekupheleni kwe methyltestosterone umjikelo, umlinganiselo wesilinganiso se-hormone ye-testosterone iyakwazi ukuphazamiseka. Kule meko, tshintshela kwipilati yokuhamba kwithuba emva kokugcina amazinga abo.
4. Iziphumo zeMethyltestosterone
Ngenxa yesigamu-sithuba esifutshane, i-methyltestosterone iya kufinyelela kwinqanaba layo kwaye ifake igazi ngeyure. Ukuba umqeqeshi osebenzayo uthatha i-steroid kungekudala ngaphambi komncintiswano, uya kuba namandla amaninzi, ukugqugquzela, kunye namandla ukuze akhuphisane.
Kwi i-methyltestosterone bulking isigaba, utshintsho luhamba kancane kwaye luyabonakala. Ngaphandle kokuba wenze okunye okubalulekileyo, awukwazi ukufumana ubunzima obuxhamlayo obunokuphupha.
I-methyltestosterone ye-half-life life in the range ye-2.5 kwiiyure ze-3.5. Kuphela, oku ku malunga neeyure ze-3.
Emva kwesilinganiso sokugqibela, i-methyltestosterone kunye ne-metabolites yayo iya kuhlala emzimbeni kwiveki phambi kokupheliswa ngokupheleleyo. Ngexesha lokujonga, ukufikelela kwi-90% yalo kuya kuba khona emcinini ngelixa abanye beza kubonakala emanzini.
Ngokuqhubela phambili kwetheknoloji, uya kukhangela iimpawu ze-steroid ezine ukuya kwiiveki ezintandathu emva kokuyeka. Nangona kunjalo, le nto inokubangela ukuba umsebenzisi uthathe i-furosemide okanye i-phenobarbital ukukhawulezisa i-excretion yovavanyo lwe-methyl.
Kwabo abajikelezayo, ukubandakanya i-methyltestosterone kwirejista yakho ngokuqinisekileyo kuya kubakho kwiziphumo ezintle. I-steroid inemiphumo encinci ye-anabolic. Ngoko ke, ukuzuza ubunzima akuchazwa kakhulu kwaye kuya kukhangela.
Enyanisweni, inzuzo ebonakalayo yesisindo ihlala ihlala ngenxa yokugcinwa kwamanzi. Ekupheleni kwesigaba sokusika se-methyltestosterone, kuya kuba namazinga aphakamileyo emanzini njengoko umsebenzisi ebhalisa ukulahleka okukhulu komzimba.
7. I-Methyltestosterone yokuBhengeza
I-Methyltestosterone yokufumana ubunzima nganye ngeso siyakwazi ukukunika ubunzima obukhulu besisu obufunayo. Ngokwenene, nayiphi na imali oya kuyifumana ngenxa yokugcinwa kwamanzi kunye nokukhula kwamanzi alandelayo. Emva kokuba uzalise umjikelezo, qiniseka ukuba uhamba ngonyango lomjikelezo weposi ukuze ugcine ubungakanani bomzimba.
Ukuze ukhuselekile, zama ukukhishwa kwe-steroid. Kwinqanaba lokubhikisha, zibandakanya iziyobisi ezinje Dianabol, Ukuqhawula, okanye Trenbolone.
8. IiMethyltestosterone IiNzuzo
1) Ukwandiswa kokuSebenza
I-steroid yenza ngokuthintela umsebenzi wezintlu kunye nokukhuthaza u-anabolism. Eli nyathelo, liyakwandisa ukusebenza, liphucula amandla onke, kwaye likhuthaza i-psyche. Kwababakhi bomzimba, abaxhasi bamandla, kunye nabadlali bezemidlalo abakhutheleyo, le mivuzo ye-methyltestosterone idibeneyo. Umsebenzisi ufumana ukuqeqeshwa okunamandla ngamandla amaninzi kunye nesigxina esiphezulu ngaphandle kokukhathala.
2) Ukwandisa u-Aggressiveness
Ngaba ufuna ukuba ngumntu onzima kummandla? Ewe, i-methyltestosterone iya kwenza. Nabani na abathatha inxaxheba kwimidlalo yokulwa baya kufuna ukucocela ulwaphulo, amandla, kunye nokugxila kumdlalo.
3) Yandisa iMiscle Mass
Nangona ungeke uzuze umzimba omzimba, ungasabhanka kwipilisi ukukhaba ukuqala kwakho i-methyltestosterone bulking umjikelo. Kufuneka uqaphele ukuba ukwanda kwindinganiso yomzimba kuhlala ngenxa yobunzima bamanzi njengoko i-hormone idibanisa.
4) I-Steroid ngokukhawuleza
Nge-methyltestosterone, uya kuziva umphumo weliza, kungekhona ngaphezu kweyure emva kokuyithatha. Utshintsho lubonakala kwixesha lokutya ngenxa yesinye sezizathu. I-steroid ine-half half-life. Ngenxa yoko, iya kufinyelela kwinani lazo kwiintlobo ezintathu.
I-5) Ukufumaneka kwamanzi
Ubukho beqela le-methyl kwisakhiwo se-methyltestosterone landisa ukwanda kwayo kunye nexabiso eliphakathi kweeyure ezithandathu kunye nesibhozo. Ukuba nje ugcina inqanaba eliphezulu leziyobisi egazini, uza kufumana amandla amakhulu kunye nokusebenza kakuhle.
Isiza lihlala ixesha elide emzimbeni xa uthabatha nge-buccal administration ngaphandle kokuba uginya ithebhulethi. Le propati iyenzeka kuba ingena kwinkqubo yokutya ngokuzenzekelayo ngokuchithwa ngaphandle kokudlula ngesibindi.
6) Ikhuthaza amaNqanaba eSettosterone
Ukuba umveliso wendalo we testosterone uphantsi, kuhlale kucebise ukusebenzisa methyltestosterone. Isilwanyana sinenzuzo kumadoda kunye ne-seconadadism yesibini kunye neyokuqala njengokwehluleka kwamathambo kunye nokusilela kwi-gonadotropin-ukukhulula amahomoni (GnRH). Ezinye iimeko zibandakanya ukulimala kwe-hypothalamic, i-testicated testicles, nokungabikho kwe-androgens engapheliyo.
Xa sicinga ukuba luhlobo oluthile lwe-testosterone hormone, i-methyltestosterone iya kwenza ngendlela efanayo kwaye ifake impawu zesini zesibini zesini.
I-7) I-Methyltestosterone Ukuxhoma
Uvavanyo lweMethyl alukho ngamandla, mhlawumbi ngenxa yexabiso eliphantsi le-anabolic kwimisebenzi ye-androgenic. Nazi ezinye iindaba ezilungileyo, nangona kunjalo. Xa ungayifakela kunye namanye ama-steroids anamandla, amathuba kukuba uya kuthungca kwisibuko.
Ngokomzekelo, ukuba unomjikelezo wokubhukuda, inhlanganisela ye-methyltestosterone ne-Dianabol, iNandrolone, iTrenbolone, okanye i-Decanoate iya kwenza. Ngakolunye uhlangothi, le steroid iya kugxininisa kakuhle ne stanozolol xa konke okufunayo kukukhupha ngamandla akho.
8) unyango lwebele lomhlaza
I-Methyltestosterone ibonakalise ukuba isebenzayo ekulawuleni i-cancer yebele esele isasazeka kwezinye iisculi kubasetyhini. Ekubeni lolu hlobo lwesisu luyi-hormone-sensitive, luya kugcina. Ezinye i-carcinomas ezincike kwiindlela ezinjalo ziyi-endometrium, enye i-leukemia, i-lymphomas kunye nomhlaza womhlaza wesifo somzimba.
Ngaphandle koko, isilwanyana sinqanda intlungu ye-postpartum. Uluhlu olukhulu kunabo bonke phakathi kovavanyo lweNzululwazi kunye noVavanyo
9) Ukulawula iMpawu zeMenopausal
Ukuqala kokuphuma kwimiqathango kwimiba ephantsi ye-androgen kwabasetyhini. Ukuhla kwe-hormone kukuxanduva lokusweleka kwesondo, ukwehla kwi-libido, ukutshisa okutshisa kunye neempawu ezihambelanayo.
Uphononongo lubonisa ukuba unyango lweemeko ze-postmenopausal kunye novavanyo lwe-Methyl lusebenza kakuhle. Kwi-upbeat, abafazi banokuthatha amanani aphantsi kwesi sidakamizwa ngaphandle kokufumana iziphumo ezimbi.
I-10) Ukunyanga ukuPhutywa koPhulo
Kwimeko yokuqalisa ukuphela komntwana, i-methyltestosterone ingaba ngowona kuphela ukhetho olufanelekileyo lokukhuthaza impawu zesini zesibini. Eli nyathelo lisebenza xa ixhoba lingaziphendulela ngokufanelekileyo ukunyanga kwengqondo.
Oogqirha beza kuhlala bebala iilisi ezinyangeni ezintandathu.
11) I-Original Male Testosterone Hormone
Nangona i-synthetic kunye ne-100% yokufakelwa, i-methyltestosterone iyimodeli ecocekileyo ye-androgen yesilisa. Isenzo saso silingana neso se testosterone. Thatha, umzekelo; isichengisi siya kubopha kwiiseli ze-receptor ngaphandle komzimba ukuqaphela ukuba i-hormone ingaphandle. Ngokuchaseneyo, uvavanyo lwe-methyl luya kwenza ngathi lu-androgen engapheliyo.
9. I-Methyltestosterone Iingxelo
Ngaphezu kwe-90% yeengxelo ze-methyltestosterone zibonisa ukuba i-steroid iyasebenza. Kubafundi bomzimba, omnye uya kuqala ukufumana ukwanda kwintlanzi kunye namandla. Ngakolunye uhlangothi, izigulane ezine-hypogonadism kunye namazinga aphantsi e-testosterone ziye zabika ukuphucuka okukhulu.
I-100% yabo bonke abasebenzisi bavumile ukuba i-methyltestosterone kulula ukuyisebenzisa nokulawula. Akukho zilingo eziyinkimbinkimbi okanye iijoke ezibuhlungu. Ngaphandle koko, ukuthatha izilwanyana kanye ngosuku kukudibanisa nabaninzi abavame ukulibala imiyalelo yabo ngenxa yezibophelelo ezahlukeneyo.
Emva komjikelo opheleleyo, kuphela isiqingatha sabasebenzisi be-methyltestosterone banelisekile. Nabani na okhethile ukuyeka ukusetyenziswa kweziyobisi wayenezizathu ezibini ezibalulekileyo. Ngokomzekelo, abantu babengenalo ulwazi oluncinane lokulawula iziphumo ezibi ngaphambi kokuba zenzeke. Ngako oko, iindawo ezintle ezingekho phantsi kweemitha eziphezulu zenza i-methyltestosterone inzuzo. Abanye babini, abanye bacinga ukuba ezinye i-steroids zisebenza kangcono kune-methyltestosterone.
Iziphumo eziPheleleyo zokugula!
Ngokusekelwe kwi ukuhlolwa kweemethyltestosterone, phantse wonke umsebenzisi uye wafumana ukuphazamiseka kwesilwanyana. Imfihlo eqinisekileyo yokugqithisa imiphumo emibi kukuthatha amanani amancinci, ukugcina ukusetyenziswa kwexesha elifutshane, nokwenza imizuzu emifutshane. Ezinye zeempembelelo zibandakanya;
Isikhumba se-oily kunye ne-acne
Umjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini
Ukukhula ngokweqile kweenwele
Iqela elijongene nalo
Ukuncitshiswa kwe testosterone
Iimiphumo zeMethyltestosterone uhambe xa uyeka ukuyithatha. Nangona kunjalo, ukulungelelaniswa kwabasetyhini kunokukulandela ekungcwabeni lakho.
Indlela Yokugwema I-Methyltestosterone Effects Side
Thatha iqondo eliphantsi le-steroid ngelixa ukhawulela ubude bomjikelezo ukuya kwiiveki ezisixhenxe ukuphepha ukunqanda isibindi
Thatha i-methyltestosterone kunye ne-5α-reductase inhibitors ezifana ne-finasteride, i-dutasteride, okanye i-compounds efanayo, eya kuzinciphisa iziphumo ze-dihydrotestosterone.
Xa isilwanyana sitshintshela kwi-DHT, sikhokelela kwiingxaki zeprotate kunye nokulahleka kweenwele.
Sebenzisa i-aromatase inhibitors ezifana neTamoxifen, Nolvadex, okanye i-Arimidex ukulwa nemiphumela yecala ye-estrogenic
Yeka umthamo xa ufumana imiphumo emibi
Sebenzisa i-detox ye-fox njenge-Liv-52 okanye i-Liver Stabil ukukhusela ilungu kumonakalo okhoyo
Ukunciphisa uxinzelelo lwe-cardiovascular strain, umise inkqubo yovavanyo ngokusebenzayo ngelixa ugwema amafutha apheleleyo, i-carbohydrate kunye ne-cholesterol. Ngaphandle koko, unokuncedisa ukutya kwakho kunye neoli yeentlanzi kunye ne-antioxidant.
Emva kokugqiba umjikelo, kufuneka uqhube umgaqo-nkqubo wePCT ukukhaba ukuqala umveliso we-hormone ye testosterone engapheliyo.
Thatha amanzi amaninzi xa ugwema iziphuzo zotywala
10. I-Methyltestosterone yokuThengiswa
Ekubeni ukusetyenziswa kweemviwo ze-methyl akukho mthethweni ngokupheleleyo, ungeke uwele phantsi kweemveliso zobuqhetseba. Ukuba unemvume yesigwebo esivela kugqirha, ukufumana i-steroid kulula nje ngokuba uthengela i-pair of sneakers. Unako ukuthenga i-Methyltestosterone powder okanye ukuthenga ukhetho olulungele ukusetyenziswa kwiphando, iinjongo zomzimba, okanye izicelo zonyango.
Kwiimeko apho ungenayo isincomo segqirha, ukhetho olulodwa kuphela lokuwa kumakethi omnyama kunye namabhabhi angaphantsi komhlaba. Ewe, akuzona zonke iifake! Ungathengisa kwiivenkile ezinje Buyaas kumgangatho ophezulu kunye neentengo ezifanelekileyo.
Kwiintengiso ze-intanethi, i-methyltestosterone ezithengiswayo ayithengi, inokwethenjelwa, kwaye unako ukuziqhathanisa ukulinganisa amaxabiso phakathi kwabadayisi abahlukeneyo.
11. I-Methyltestosterone Vs Testosterone yeZakhiwo zokwakha umzimba
I-Methyltestosterone yi-androgen engapheliyo, efana ne-testosterone engapheliyo. Nangona eyangaphambili idibeneyo, bobabini baneendlela ezifanayo zesenzo kwimeko apho umzimba ongenakukwazi ukuchazela umahluko. Ngaphandle kwe-testosterone yemvelo, kukho ezinye iimpawu ezinjenge-Test Propionate okanye iCypionate, esebenza ngendlela efanayo.
I-Methyltest inobungakanani obukhulu bokubakho komlomo xa kuthelekiswa ne testosterone ngenxa yokongezwa kweqela le-methyl kwisakhiwo sayo. Nangona kunjalo, zombini i-steroids inokuphatha unyango olusenyangeni, u-hypogonadism, intlungu ye-postpartum kunye ne-engorgement, umdlavuza webele, kunye neengqungquthela ezingafaki.
Baye kwiqela lama-anabolic-androgenic steroids
Bandisa ukwenziwa komsebenzi, amandla kunye nobunzima bemisipha kumalungu omzimba, abadlali bezemidlalo abakhutheleyo kunye nabaphathi be-powerlifters
Zinezicelo zonyango ekuphatheni i-hypogonadism kunye namazinga aphantsi e-testosterone
Ixabiso ngeyunithi Kancinane kakhulu ngaphandle kokuba uthenge i-methyltestosterone ngobuninzi Ngaphantsi
Umzila wolawulo I-Oral, buccal, kunye neelwimi Ikhona njengejel ye-transdermal kunye nesisombululo
Ulwakhiwo Kukho iqela le-methyl kwi-17th isikhundla se-athomu yekhabhoni Akukho methyl kwisakhiwo sayo
I-Methyltestosterone iphakathi kwee-androgenic steroids ezimbalwa kunye nemiphumo yomzimba. Ubuncinane, isilwanyana siyifumaneka kwaye sithembeke kuba ezinye iindawo ziye zasemthethweni ukusetyenziswa kwayo kwizicelo zeklinikhi.
Nangona le nqaku ayikuqinisekisile ukuba ukhuseleko olupheleleyo xa usebenzisa uvavanyo lweemethyl, lukunika i-rundown kwizinto ozilindeleyo xa uthabatha. Ngokusekelwe kwingcaciso, unokulinganisela umngcipheko kunye nokulinganisela kunye nezibonelelo. Ukuba kuyafaneleka, ngoko ulungile ukuthenga i-methyltestosterone kwi-intanethi.
Zonke iziyobisi zinempembelelo. Ngako oko, imfihlelo ekhethekileyo yokufumana iziphumo kukulawulwa kwezi mpu. Ukuba ufunde le nqaku, uya kuqonda iinqwelo ezimbalwa.
Ngaba ufuna idibanti? Khangela kunye nabenzi be-methyltestosterone abathembekileyo Buyaas.